PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-27 - Okwethusayo ngomuzi othengwe ngubabes
Okwethusayo ngomuzi othengwe ngubabes
Ilanga langeSonto - 2017-08-27 - Front Page - ZOWAKHA MBATHA
SEKUVELE ihlazo ngomuzi okuke kwavela izindaba zokuthi ubongekile Simelane, odume ngelikaBabes Wodumo, uwuthengele abazali ethekwini endaweni yabadla izambane likapondo.
Abazishwashwathayo bathi ngamampunge ukuthi ubabes uthengele uyise, umbhishobhi Welcome Simelane, umuzi njengoba ebehlala emaflethini aseAlbert Park, phakathi edolobheni ethekwini. Kuthiwa lo muzi athuthele kuwo empeleni ubabes uyawurentela hhayi ukuthi uwuthengile.
Lezi zindaba zisabalala nje yingoba abasondelene naye ubabes banokwesaba ukuthi kungenzeka abazali bazithole sebephindela khona eflethini njengoba kuthiwa kazihambi kahle izinto ngasezimalini enkampanini esingethe umsebenzi wakhe iwest Ink.
Imithombo ithi umnikazi weWest Ink, umandla Maphumulo odume ngelikamampintsha, useke wakhala nakwabanye osozimali etsheleka amasenti. Ukushoda kwezimali kule nkampani kungase kuholele ekutheni ubabes angakwazi kwakukhokhela irenti yalo muzi ohlala abazali bakhe.
“Okubuhlungu ngobabes wukuthi nguye ofaka imali ewest Ink kodwa akazi nokuthi kwenzekani ngemali. Ayitholayo yena uyiphiwa ngumampintsha avele anganaki ngoba phela yisoka lakhe. Akazi lutho nje (ngokwenzeka ngezimali),” kuphawula umthombo ozazi kangcono ezikababes newest Ink.
Sekuyindaba endala eyokusolwa ngokuthi bayajola laba ababili nakuba bengakaze bona baphumele obala bavume.
Lo mthombo uthi inkinga la ngumampintsha okungaqondakali ukuthi uyenzani imali efakwa ngubabes enkampanini njengoba kunguye okukholakala ukuthi ufaka imali eningi.
Uze umthombo ulinganise ngamagigi abeqashwe kuwo ubabes ngesikhathi samaholidini kazibandlela (December), nokubukeke sengathi afake ngaphezu kwesigidi enkampanini ngendlela abemaningi ngayo njengoba bekubiza ngaphezu kuka-r80 000 ukumqasha.
Namanje usaqashwa ezindaweni eziningi nakuba seyiboniswana eyemali aqashwa ngayo njengoba selehlile idumela.
Umthombo uveza ukuthi umampintsha uthathe imali abebehlele ukuba ubabes athengele ngayo abazali umuzi wakhokhela izikweletu ngoba bese kudliwa umuzi wakhe ewestville, ethekwini.
ILANGA Langesonto like lawuhosha phambilini umoya wokuthi lo muzi kamampintsha ufakwa endalini kanti bese kuse- le kancane ukuthi kwenzeke lokho kodwa kwabuye kwashintsha izinto.
Ngemuva kwalesi senzo sikamampintsha (sokusebenzisa imali ekhokhela umuzi wakhe) kuthiwa kuphoqeleke ukuba okungenani abatholele abazoqasha kuwo kodwa baveza kwabasondelene nabo ukuthi uthengiwe lo muzi.
Ethintwa uyise kababes ngenhloso yokuqinisekisa ulwazi analo ngobunini bomuzi ahlala kuwo ubhoke wakhahlela, watshela intatheli ukuba ifonele umfowabo okhulumela umndeni ngoba yena akasafuni ukuphawula ngezinto ezithinta ubabes.
Kwale noma intatheli imchazela ukuthi lokhu kuqondene naye ngqo, hhayi nomculo kababes kodwa washunqa.
“Niyahlupha nina bantu bezindaba ngoba nizobe senisuka nibhala okwenu. Ngiyazi vele uzongibuza ngezindaba zikaBabes. Uma ungamtholi umfowethu fonela umsizi ( personal assistant) wakhe ubabes,” washo wavala ucingo emuva komzukuzuku intatheli inxusa ukuba ayinike ithuba ze ezwe efuna ukukhuluma ngakho.
Olukababes ucingo belukhala lungaphendulwa muntu, nomyalezo athunyelelwe wona enxuswa ukuba abuyele entathelini akawuphendulanga kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.
Nakolukamampintsha ucingo bekwenzeka into efanayo futhi wangawuphendula umqhafazo kwaze kwashicilelwa.
Osebenza ehhovisi lasewest Ink, ozibize ngomelody Mhlongo, uthe ukhona umampintsha kodwa kabekho endaweni eyodwa ngaleso sikhathi.
*Bheka olunye udaba ekhasini lesi-7
KUTHIWA ingamampunge indaba yokuthi ubabes Wodumo uthengele uyise umuzi ahlala kuwo manje.